Isku dayga dabka ee Dukaanka Apple, Apple wuxuu ku kacayaa 1 bilyan oo doolar, cillad xagga amniga ah oo ku dhacda macOS, u nuglaanshaha Specter iyo Meltdown iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican waxaan ka imid Mac | Waxaan ka socdaa mac
Isku dayga dabka ee Dukaanka Apple, Apple wuxuu ku kacayaa 1 bilyan oo doolar, cillad xagga amniga ah oo ku dhacda macOS, u nuglaanshaha Specter iyo Meltdown iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Pedro Rodas | | Apple, Noticias, dhowr
Meelo badan oo ka mid ah Spain waxaan ka jirnaa duufaanno nolosha ka dhigaya waxoogaa dhib badan, laakiin had iyo jeer waxaa jira meel lagu akhriyo isku-darka 'Soy de Mac'. Dhibaatada Intel ayaa sii socota in laga hadlo ama ay sii socdaan inay soo baxaan wararka xanta ah ee HomePod la siidaayo.
Noqo sida ay noqon karto, Soy de Mac waxaan had iyo jeer haynaa soo uruurinta wararka loo aqriyay inta badan toddobaadkan boggeena.
Waxay umuuqataa in baryahan dambe Apple ay soo baxdo cufan waana tan iyaga kujirta Apple Store khilaafku ma joojiyo inuu dhaco warka ka dhiga. Xaaladdan oo kale, waxay ahayd markiisii ​​hore ee Zurich Apple Store, kaas oo waa in la daad gureeyaa ka dib markii uu dabka qarxay.
Dukaanka Apple oo ay la socdaan ilaa 50 macmiil waa in gebi ahaanba la daad gureeyaa dhammaan shaqaalaha kadib markii alaamka qiiqa ka digaya uu dillaacay dabka hortiisa kaasoo diirada saaraya aqoon isweydaarsiga batariga qalabka. Sidii oo kale taasi kuma filnayn, maalmo ka dib, wax la mid ah ayaa ka dhacay Spain oo ka dhacday Apple Store ee ku yaal Valencia.
Sida laga soo xigtay warbixinno cusub, Apple waxay noqoneysaa sanadkan 2018 shirkadda ugu qiimaha badan adduunka, gaarey qiime ah $ 1 trillion. Kordhinta joogtada ah ee kudhowaad 11%, Apple ayaa kor usii kacaysay sanadba sanadka ka dambeeya boosaska ugu horreeya ee shirkadaha loo arko inay yihiin kuwa adduunka ugu qiimaha badan. Hada, meesha ugu horeysa waa meel la gaari karo.
Cilad cusub ayaa laga dhex arkay nooca hadda jira 10.13.2 ee macOS High Sierra. Xaaladdan oo kale, waxay la xiriirtaa maaraynta dookha dukaanka arjiga ee Mac. Xaqiiqdu waxay tahay in daaqadani lagu furi karo adoo gelinaya lambar sir ah, markaa amniga qaybtaas nidaamka ayaa waxyeellaysa.
Tani waa a qalad ay Apple horey u ogaatay iyo in lagu hagaajiyay betasiyadii ugu dambeeyay ee la diyaariyay si ay u horumariyaan, markaa haddii aad raacdo tallaabooyinka aan kuu sheegayno, waad hubin kartaa taas, runtii, cayayaankaas ayaa jira.
Tallaabada amniga ayaa la kordhiyay tan iyo 5-tii Janaayo ee la soo dhaafay markii isticmaalka taleefannada gacanta ee shaqsiyadeed horeyba looga mamnuucay gudaha iyo hadda sidoo kale wuxuu saameeyaa dharka la gashan karo iyo wixii la mid ah, ka mid ah kuwa sida muuqata Apple Watch ayaa taagan.
Apple ayaa horumariyay cusbooneysiinta mac OS 10.13.2 in lagu daro balastarka ka ilaalin doona Macs-ka nuglaanta Specter iyo Meltdown, sidaan kuu sheegay oo ku saabsan waxaan ka imid Mac, waadna hubin kartaa iskuxirka cutubkan.
In kasta oo Apple uusan ka hadlin hoos u dhaca ku yimid waxqabadka processor-yada Intel, ee laga helo Mac-yadayada, haddana fagaarayaasha ayaa faallo ka bixiyay hoos u dhac ku yimaadda waxqabadka iyada oo ay ugu wacan tahay inaad gooni u go'doomiso qayb ka mid ah xogtayada sirta ah ee naga socda. Dhanka kale, Hoos udhaca waxqabadka wuxuu saameynayaa waxbadan, waayeelka uu Mac-du leeyahay Sida muuqata, Apple wuxuu ku bilaabi lahaa u nuglaantaan cusbooneysiinta 10.13.1.
Dhibaatooyinka shirkadda chip ee Intel, ha joogsan. Baahiyaha la helay awgeed u nuglaanta ay soo bandhigayaan awgeed Specter iyo Meltdown hadda wuxuu ku biirayaa dacwadii ay gudbiyeen qaar ka mid ah saamileyda shirkadda ka dib hoos u dhaca qiimaha saamiga, iyadoo la wajahayo magdhow milyaneer macquul ah oo ay Intel wajaheyso.
Illaa afar shirkadood oo sharci yaqaanno ah ayaa dacwado gudbiyay maalmihii la soo dhaafay. Iyada oo ku saleysan dacwadahaan, shirkaddu waxay ka warqabtay naqshadeynta iyo cilladaha wax soo saar. Laakiin shirkaddu way ilaalisay macluumaadkan, si aan loogu ogeyn adeegsadayaasha, soo saarayaasha iyo saamileyda. Kuwa dambe ayaa arkay hoos u dhaca qiimaha maalmihii la soo dhaafay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Isku dayga dabka ee Dukaanka Apple, Apple wuxuu ku kacayaa 1 bilyan oo doolar, cillad xagga amniga ah oo ku dhacda macOS, u nuglaanshaha Specter iyo Meltdown iyo waxyaabo kaloo badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Sida loo bedelo qaabka iyo goobta shaashadaha shaashadda Mac